Cape Verde - Washington DC izao ao amin'ny Cabo Verde Airlines
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Cape Verde - Washington DC izao ao amin'ny Cabo Verde Airlines
Desambra 8, 2019
Ny sidina voalohany teo anelanelan'ny Cabo Verde sy ny US Capital Washington DC, dia notontosaina ny alahady 8 desambra lasa teo, ary niainga avy tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Amílcar Cabral, ao Sal, tamin'ny 09 ora sy sasany maraina, niantsona tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Dulles tamin'ny 30:02 hariva.
Talohan'ny nialàny, Jens Bjarnason, CEO an'ny Cabo Verde Airlines, dia nidera ny fiandohan'ny fifandraisana tamin'ny renivohitr'i Etazonia.
"Tena faly izahay nanangana làlana vaovao mankany Washington, DC", hoy i Jens Bjarnason, tompon'andraikitra ambony an'ny Cabo Verde Airlines.
"Ny faritra renivohi-pirenena teo aloha dia tsy nanana fifandraisana an-habakabaka firy tamin'i Afrika, manome ity zotra vaovao ity mety hisy fahombiazana."
Ny lalana dia hiasa intelo isan-kerinandro, ny alahady, alarobia ary zoma miainga avy any Sal Island ary amin'ny Alatsinainy, Alakamisy ary Sabotsy avy any Washington, DC
Ny sidina rehetra dia hifandray any Sal Island, foibe iraisampirenena Cabo Verde Airlines izay ahafahana mifandray amin'ny toeran'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao Cabo Verde, Brazil (Fortaleza, Recife ary Salvador), Senegal (Dakar), Nizeria (Lagos), ary Eoropa (Lisbon, Paris, Milan ary Roma).
Ho fanampin'ny fifandraisana hub ao Sal Island, ny programa Stabover an'ny Cabo Verde Airlines dia mamela ny mpandeha hijanona mandritra ny 7 andro ao Cabo Verde ary hikaroka ireo traikefa samihafa any amin'ny nosikely tsy misy sarany fanampiny amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina.
Ity fifandraisana vaovao ity dia mikasa ny hanamafisana ny fisian'ny orinasa eo amin'ny tsenan'i Amerika Avaratra. Vao tsy ela akory izay dia nanapa-kevitra ny hanamafy ny fifandraisany amin'i Boston ihany koa ny Cabo Verde Airlines, miaraka amina antso iray isan-kerinandro indray, izay hanomboka amin'ny 14 Desambra.
Etazonia miorina Lehiben'ny tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany any Afrika niarahaba ny Cabo Verde Airlines ary naneho ny fanantenany hiara-hiasa amin'ilay kaompaniam-pitaterana hampifandray an'i Afrika sy ny fizahantany afrikanina.
Cabo Verde Airlines dia mpanamory fiaramanidina voalamina, miasa amin'ny foibe iraisam-pirenena ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Sal's Amílcar Cabral. Nanomboka ny volana novambra 2009, ny Cabo Verde Airlines dia mpikambana mavitrika ao amin'ny International Air Transport Association (IATA). Ny orinasa dia mitazona fifanarahana fitantanana miaraka amin'i Loftleidir I Islandic monina ao Reykjavík, sampana iray an'ny Icelandair Group.
Ahoana no nahatonga ny Vehivavy Nasa ho lasa ampahany amin'ny Princess Cruises
Mety ho valin'ny Zimbaboe ho avy ve ny Dr. Walter Mzembi?